BBC Learning English - Course: Essential English Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 39 / Activity 1
Namoonni yeroo hojiirraa bilisa ta’anitti maal akka hojjetan akkaataa ittiin gaafattu hubachuuf caqasi.
Listen to the audio and take the quiz. Sagalee kana caqasitii battalicha hojjedhu.
Yooyyaa! Barataan Afaan Ingilizii kamiyyuu isa malee baruu kan hindandeenye qooqa barbaachisoo kan isiniif dhiheessu gara Essential English Conversation’tti baga nagaan dhufte. Ani Caaliidha. Qaphii kana keessatti, namoonni, guyyaa hojii hinqabne maal akka raawwatan akkatti gaafattu baratta.
Namoonni lama hojii hinqabne maal akka hojjetan yoo walgaafatan caqasi.
Jalqaba, Saam, ‘yeroo hojii hinqabnetti’ ‘in your spare time’ jette itti dabaluun ‘Maal hojjettaa…?’ ‘What do you do…?’ jettee Roobiin gaafattee. Kana jechuun yeroo hojiirra bilisa taatu jechuudha. Caqasiitii irradeebi’i.
Roob ittaansuun, ‘Baandii kessattan gitaara taphadha’ ‘I play the guitar in a band’ jedhe. Waa’ee taphannaa meeshaalee muuziqaa ittiin ‘taphannuu’ dubbachuuf jecha ‘play’ jedhu fayyadamna. Jechi ‘band’ jedhu ‘baandii muuziqaa’ jechuudha.
Roob ittaansuun gaafii walfakkaataa gaafatame sana deebisee ‘Atihoo?’ jechuudhaan Saamiin gaafate. Caqasiitii irradeebi’i.
Dhumarratti, Saam akka ispoortii hojjechuu jaallattu himte. Waan hojjachuu jaalattu tokko ‘I like’ eega jettee booda jecha ‘-ing’ xumuraarratti ittaansuun ibsuu dandeessa. Fakkeenyaaf yoo muuvii kan ilaaluu kan jaallatu ta’e, ‘I like watching movies’ jechuu dandeessa. Caqasiitii irradeebi’i.
Dansa! Ammammoo namoonni gara garaa wayita yeroo hojjiirra bilisa ta’e wayita qabaatan gochawwan raawwatan yoo dudubbatan caqasuudhaan maal akka jette mirkaneeffadhu.
Tole, irradeebinee haayaallu. Himoota Afaan Ingiliziitiin caqasiitii irradeebi’i. Yeroo kanatti tokkoo-tokkoosaanii al lama dhageessa.
Baay’ee gaarii! Afaan Ingilizii hagam dansaa akka yaadattu haa ilaallu. Himoota qooqakeetiin caqasiitii Afaan Ingilizii keessatti maal akka ta’an himi.
Yeroo hojirra bilisa taatu maal hojjattaa?
Baandii keessaan gitaara taphadha.
An ispoortii hojjachuun jaaladha.
Misha! Tole, amma namoonni yeroo hojiirra bilisa ta’an maal akka hojjatan akkaataa ittiin gaafattu ni beekta. Saamiif deebii laachuudhaan shaakali. Gaafii walfakkaatu ‘Atihoo?’ ‘What about you?’ jettee gaafachuu hindagatiin.
Hojii gaarii! Amma namoonni yeroo hojiirra bilisa ta’an maal akka hojjetan Afaan Ingiliziitiin gaafachuu ni dandeessa. Waan baratte shaakaluu hindagatiin. Hiriyaa tokko barbaaddadhuutii wayita hojiirra bilisa ta’utti maal akka raawwatu Afaan Ingiliziin gaafachuun shaakali. Barnoota dabalataa Essential English Conversation‘iin yeroo ittaanutti walitti deebina. Nagatti! Bye!
Jechoota tartiiba sirrii ta’een tarreessuun waan hanga ammaatti baratte mirkaneeffadhu.
Wayita hojiirra bilisa taatuutti maal hojjettaa?
Jechoota tariiba sirrii ta’een tarreessi.
Jechi 'do' jedhu al-lama dhufa.
Jecha ‘like’ booda jecha ‘-ing’ fayyadamna.
Gaalee 'I play…' jedhuun eegali.
Kutaa barnootaa Afaan Ingilizii Barbaachisoo kan qooqa daran faayida-qabeessa ta’an keessatti barannuufi daandeettii dhageettiikee ittiin shaakaltutti yeroo itaanu walitti deebina.
Wayita hojirraa bilisa taatutti maal hojjettaa?
Baandii keessattan gitaara taphadha.
Qurxummii qabuufan gara lagaa deema.
Ispoortii adda addaa taphachuu jaaladha.
Hiriyootakoo waliin kubbaa kachoo taphadha.